Ny mianatra ny mipetraka amin'ny kofehy dia ny fanoloana ny vatanao ho azo havaozina, hentitra ary hazavana. Ny fanaovana fampiharana ho an'ny fahaleovan-tena dia mitaky olona manana faharetana lehibe, fiaretana sy fikirizana. Mba hanamorana ny fizotran'ny fihanaky ny tongotra dia mety ho simulateur ho an'ny kambana.
Nahoana ianao no mila baskety ho an'ny kambana?
Ny simulator, izay manampy amin'ny fipetrahana eo amin'ny kibay, dia mety ho ilaina amin'ny mpandihy, mpitaingina, gymnastes, mpilalao baolina kitra, mpilalao baolina kitra sy mpilalao hafa, ary koa ireo olona te-hividy plastika sy tsy ampoizina amin'ny fitohizan'izy ireo. Ny dingana nentim-paharazana nentin-drazana ho an'ny lavaka lavalava na tsipika dia lava be, ny mpanatontosa dia hanampy amin'ny fanatanterahana haingana ny vokatra.
Ny tombony faharoa amin'ny fampiasana ny simulateur dia mety hampihena ny fanaintainana ary hampihenana ny loza ateraky ny ratra. Matetika ireo atleta mandritra ny diany no manao tsirambina ny fitsipika momba ny fiarovana sy ny hetsika manjavona manimba ny hozatra sy ny ligaments. Ny mpilalao ara-panatanjahan-tena dia manampy amin'ny fanatanterahana ny fihetsiketsehana amim-pahalemem-panahy sy tsimoramora, fa tsy manome fisalasalana.
Ny simulateur qualitative ho an'ny stretching dia vita amin'ny vy, izy ireo dia manana seza, lefona sy legina manana kirany mahazatra. Ao amin'ny simulator ianao dia manana fahafahana hametraka ny kisarin'ny tady ary hahita ny fivoaranao tsy tapaka. Na izany aza, ny fampiharana eo amin'ny lamandy ho an'ny kambana any am-piandohana dia mahafinaritra amin'ny mpampianatra iray izay hampiseho ny fitsipika fototra momba ny fiofanana sy fanampiana amin'ny toro-hevitra.
Torohevitra mahasoa ho an'izay te hipetraka eo amin'ny kambana:
Alohan'ny hanombohana ny diany dia mila mampitony ny hozatrao ianao - manandrama, ohatra, 20 minitra mihazakazaka, bisikileta iray na mitsambikina miaraka amin'ny tady;
Aza manery ny fanaovana fanatanjahantena - Ny fitomboan'ny tsy mety dia mety ho ratra mafy;
Ataovy isan'andro izy io - mahomby kokoa raha ampitomboina amin'ny alahelo indray mandeha isan-kerinandro.
Ahoana ny fananganana ny hozatry ny fanontam-pirinty?
Ny simenitra tranainy - ireo safidy tsara indrindra
Fanatanjahana ho an'ny tongotra ao an-trano
Ahoana ny fahavoazan'ny zanak'omby?
Ny fampandrosoana ny fitoviana
Fanatanjahantena ho an'ny fahaverezan'ny lanja
Burdock menaka ho an'ny volo
Beespine - toetra ara-pahasalamana sy ny tsiambaratelon'ny fampiharana
Nahoana no applets mena?
15 fomba tsy mahazatra amin'ny fampiasana ovy eo amin'ny fiainana andavanandro
Fillet of Alaska Pollock
Ahoana ny famongorana ny akoho ao anaty vilany?
Sakafo mofomamy - sakafom-bozaka
Fitomboana sy mari-pamantarana hafa Sophie Turner
Dress code ao amin'ny birao
Charlotte on kefir - recipe
Mampianatra sariitatra ho an'ny ankizy
Ahoana ny fanokafana fivarotana biby an-tsokosoko?